China Soft PVC Pin Amabheji ifektri abakhiqizi | SJJ
Izikhonkwane ezithambile ze-PVC zithambile, zinemibala futhi zilula. Amalebula wangokwezifiso ze-PVC alungele imikhiqizo yokufaka uphawu yokuphromotha, etholakala ngamazinga amabili, imiklamo ye-3D nelogo ephrintiwe ngendlela ehlukile yangokwezifiso.
Amabheji wephini avame ukusetshenziswa ezimeni ezahlukahlukene njengezikole, amaphathi, ukukhushulwa, izikhumbuzo noma izipho. Uma kwenzeka ungawathandi amabheji wensimbi ebandayo, amabheji weSync PVC ayizinto okufanele ukhethe. Amabheji ephini weSoft PVC athambile ezandleni futhi azwakala kahle kunamabheji ensimbi. Imiklamo eminingi yamabheji aphansi e-PVC pin izibalo zekhathuni, ngakho-ke zamukelwa yizingane nabazali bazo. Ama-logo angenziwa ngemininingwane emincane njengokugcwaliswa kombala, izitika ezengeziwe eziphrintiwe zokuphrinta njalonjalo. Usayizi ungaba mncane noma ube mkhulu, ubujamo bungenziwa ngokuya ngesicelo sakho.
Amabheji weSoft PVC pin ashibhile futhi alungele kakhulu ukukhushulwa. Iqoqo eligcwele lamabheji ephini weSoft PVC anezinhlamvu ezihlukile adumile phakathi kwentsha yenhlangano noma yokwakha iqembu. Amabheji ethu wePin PVC ayizemvelo, angadlulisa zonke izinhlobo zezidingo zokuhlolwa. Kuzohlangabezana nezidingo zakho hhayi amanani kuphela kepha nekhwalithi. Osayizi abahlukahlukene be-oda bamukelekile, futhi ama-oda amakhulu azothola amanani angcono kakhulu.
Ukukhiqizwa kwethu kwamaphini amabheji weSoft PVC kungaqedwa ngesikhathi esifushane ngekhwalithi ephezulu. Usuku olu-1 lomsebenzi wobuciko wokukhiqiza, izinsuku ezi-5 ~ 7 zamasampuli, izinsuku eziyi-12 ~ 15 zokukhiqiza. Lokhu kuzokusiza kakhulu ekunwetshisweni kwemikhiqizo. Isisindo esincane futhi sikusiza ukonga izindleko zokuthumela. Insiza ehamba phambili izonikezwa ngokushesha noma nini lapho sithola imibuzo yakho.
Ama-Motifs: Die Struck, 2D noma i-3D, uhlangothi olulodwa noma izinhlangothi ezimbili
Imibala: Imibala ingafanisa umbala we-PMS
Ukuqedela: Zonke izinhlobo zomumo ziyamukelwa, ama-logo angaphrintwa, abhalwe nge-embossed, i-Laser iqoshwe ngakho-ke cha
Izinketho Zokunamathisela Okuvamile: Izinduku zokundiza zensimbi noma ze-PVC, izikhonkwane zokuphepha, odonsa, isikulufa namantongomane, nokunye ngesicelo sakho ngasinye
Ukupakisha: 1pc / isikhwama se-poly, noma ngokuya ngesicelo sakho
Akukho mkhawulo we-MOQ
Langaphambilini Ukudonsa Okuzenzakalelayo kwe-PVC
Olandelayo: Amalebula weSoft PVC
Amabheji Wepini Engokwezifiso
izikhonkwane zepini zepulasitiki
ibheji elithambile le-pvc
i-pin ethambile ye-pvc
Izikhonkwane ezithambile ze-PVC
Imisila yenkomo eyi-Tubular